Meydka Gabar yar oo Boosaaso laga helay | KEYDMEDIA ONLINE
Meydka Gabar yar oo Boosaaso laga helay
Degaanada Puntland ayaa mudooyinkii dambe waxaa kusoo kordhayay kiisaska Kufsiga loo geysto gabdhaha yaryar, waxaana laamaha amniga ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan.
BOOSAASO, Soomaaliya - Mas'uuliyiinta magaaladda Boosaaso, ee xarunta gobolka Bari, ayaa sheegay inay heleen meydka gabar yar, oo maalmihii lasoo dhafayay qoyskeeda ka maqnayd.
Booliska warbixintiisa waxaa lagu sheegay in gabadha kiiskiisa uu ku socdo baaritaan, islamarkaana hadda xaqiijin karin cida dishay iyo sababta. Laakiin, wararka Keydmedia Online heshay ay sheegaya in gabadha la kufsadey kadibna wajiga laga bur-buriyay, si aan loo aqoonsan.
Dadka degaanka ayaa carro iyo argagax ka muujiyay falkan foosha xun ee lagula kacay gabadha, iyagoo dalbadey in si deg deg ah cadaaladda loo horkeeno kuwasii dilka geystay, oo aan illaa hadda lasoo qaban.
Degaanada Puntland ayaa waxaa sanadihii dambe kusoo badanayay kiisaska kufsiga loo geysanayo gabdhaha yar-yar, waxaana waalidiinta ay sheegeen in Saraakiisha maamulka ay ka gaabiyay wax ka qabashadda arinta.
0 Comments Topics: boosaaso kufsi puntland
Puntland ayaa lagu eedeeyay inay ka shaqeynayso sidii Galmudug colaadda ka taagan usii socon lahayd, iyadoo ka ilaalinaysa inay furato dekadda Hobyo.